Kushone ababili kweyeloli | News24
Kushone ababili kweyeloli
ISITHOMBE: sithunyelweKusale kunje ngemuva kokuba kungene iloli.
USASHAQEKILE umphakathi waKwaMpumuza endaweni yasema-60s ngemuva kokuphaphalaza kweloli ebelithwele izitini lingene emzini womuntu kwashona abantu ababili ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-11 kuMasingana (January).
Labo abashonile uNkk Khokhiwe Ntuli (50) waKwaMpumuza ePhayiphini okwakunguyena owayeyothenga izitini kanye nomsizi womshayeli weloli uMnuz Thimbinkosi Miya waseZibovini.
Ngokuthola kwe-Echo iloli belilayishe izitina ezingama-500 kanti kusolwa ukuthi liphelelwe amabhuleki endaweni eyehlayo nokuholele ekutheni iphaphalaze iphume emgwaqeni iyongena emzini womuntu ongezansi komgwaqo yabhidliza irawondi.
Laba abashonile bashonele khona lapho kanti umshayeli yena nomunye umsizi wakhe owayehleli ngemuva elolini baphuthunyiswe esibhedlela ngemuva kokulimala kanzima.
UMnu Xaba nongumnikazi womuzi uthe namanje basashaqekile ilesi sigameko kanti nemiqondo yabo isahlukumezekile ngemuva kwento abayibona.
“Mina ngangihleli phambi komnyango nomunye umuntu owayefikile ukuzongibona kanti ingane yentombazane yalayikhaya yona yayihleli kuwona urawondi idla. Iloli labonwa ilomuntu engangihleli naye liqhamuka phezulu wathi indlela elihamba ngayo ngeke lisakwazi ukujika. Nami ngathi uma ngithi ngiyabona ngabona nje ukuthi ayi seliyazihambela liqonde ngqo kuthina ngabe sengiyaqala ngiyamemeza ingane lena engaphakathi yangazi ukuthi yenzenjani iye emsano okanye iphume.
“Ngabe sengi phuthuma ngiyivulela umnyango yaphuma ngokushesha kwaba iyona ndlela eyasinda ngayo ke leyo. Iloli lashaya ihhafu wonke warawondi labe selibakhipha laba abashonile labafaka ngaphansi kwathayela. Amalunga omphakathi azama ukubasiza kodwa basebebeshonile vele.Sisashaqekile nje ngalesi sigameko namanje,”kubeka yena.
Uqhube wathi sekujwayelekile ukuthi izimoto ziphaphalaze zingene emzini yabantu kodwa wathi bekungokokuqala engenelwa imoto yena emzini wakhe.
Umndeni kaNkk Ntuli uthe ubehambe eyolanda izitini edolobheni laseMgungundlovu.
“Uma wayecelwe u-anti ukuthi ayomlandela izitini ngoba yena wayengaphilanga kahle.Ngesikhathi ehamba izingane zambuza ukuthi uzobuya nini wathi uzobuya manje nangempela awaphelanga amahora amabili kodwa kwaba ukuthi usebuye sekwenzeka lesi sehlakalo. Mina ngamenyezwa ingane ithi uma usebe engozini yeloli kodwa ubesaphefumula. Angizange ngiyizwe ngisho ukuyizwa mina iloli ngesikhathi ingena emzini womuntu kuze kube ngitshelwa ingane.
“Ngaphuthuma khona nokwathi uma ngifika sekukhona abezimo eziphuthumayo kanye namaphoyisa ngabe sengicela ukubona uma kodwa bangangivumela. Ngabuka ngesikhathi kukhishwa laba abanye ababelimele beyiswa kuma-ambulensi kodwa uma ngangamubona nokuyila pho engavele ngazitshela khona ukuthi kushuthi akasekho kodwa ngasengi funa ukuzidelisa nje,” kubeka uNks Busi Goge noyindodakazi endala kaNkk Ntuli.
Uqhube wathi bagcine sebemutshelile ukuthi ungasesihlahleni samapetshisi nokuyilapho amufica khona esethulile.
“Ubebeke isandla ebusweni okukhombisayo ukuthi kukhona into ayekade eyivika nengisola ukuthi othayela kanti nethambo lakhe lomgogodla laliphukile. Silimele kakhulu ngokushiywa uma kubuhlungu. Uma ubesanezifiso eziningi zezinto abaefuna ukuzenza,” kubeka yena.
Amanye amalunga omndeni aveze ukuthi uNkk Ntuli ubengaligibeli iloli ngoba ubelisaba ubeze ancamele ukuthi alandele ngenye imoto ngemuva kodwa abazi ukuthi yini emenze ukuthi aze aligibele ngalolu suku.
Bamuchaze njengomuntu obenothanda kodwa futhi engayithandi into engalungile, elithanda neqiniso.